Video Mampiaraka izao tontolo izao - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny sary ny amin'ny isan'andro fifaninanana andro mampiseho ny tsara tarehy indrindra ny tovovavy sy ny tovolahy. Ofisialy fampiharana ny lehibe indrindra ara-tsosialy sy ny fialam-boly tambajotra"Google Mampiaraka"; An'arivony ireo mpampiasa vaovao sy ny sary dia nanampy isan'andro; Marin-toerana, azo antoka sy tsy manana ahiahy ny Fiarahana sy socialization fampiharana. Isan'andro, isika mifidy ny tsara indrindra sary ao amin'ny faritra samihafa ao Frantsa, Belarosia, Alemaina, Italia sy firenena hafa mifototra eo ny isan'ny"mitovy"fanehoan-kevitra voaray isan'androAfaka hanohana ny mpandray anjara na ny hanandrana izany, ianao ihany no mila ny sary iray, dia tsara manana ny fiheverany ny tenany. Ianao ihany no afaka mankafy ny sary, dia soraty ny hoe"tiako", ataovy mampamangy, ary avelao ny fanehoan-kevitra. Efa vonona ny zavatra rehetra ilainao:"toy ny"antontanisa sy ny fahatsapana, tsy tapaka ireo mpandray anjara, ny loka sy ny fanomezam-pahasoavana. Mandehana any amin'ny pejy ireo izay liana ianao hijery bebe kokoa ny sary sy ny handao ny fanehoan-kevitra. Manana na inona na inona ho very: Raha vao mamaly ianareo, dia avy hatrany dia mahafantatra ny momba izany. Momba ny"sary androany"endri-javatra: Syncing amin'ny Google ny mombamomba Mampiaraka Mety mitsofoka amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy: Facebook, Ry izao tontolo izao Vaovao isan'andro ny sary sy ny mpandray anjara Tsy maintsy fitantanana - afa-tsy ny tena manokana sy ny tena ny sarin'ireo olona "Velona"videocassette: ao anatin'ny minitra vitsy, tsy misy latsaka, noho ny sary vaovao dia nanampy. Ny fahafahana hanivana ireo mpampiasa amin'ny lahy sy ny vavy sy ny faritra ao amin'ny live feed playback mampiseho afa-tsy ireo izay liana amin'ny. Afaka mahazo tanteraka ny fanehoan-kevitra an'arivony sy"tia"sary. ampio mba favoris Fahafahana manangona na buy fahatsapana Fahafahana mba hahagaga ny olona sy ny hahatonga azy ireo. Fahafahana manokana mifandray amin'ny isaky ny mpandray anjara ny fifaninanana.
Famaritana ny asa fanompoana sy ny fomba mba hahazo maimaim-poana ny fifandraisana Maimaim-poana ny fifandraisana fa tsy hanompo ny tanjon'ny fifampidinihana. Tsy toy ny toro-hevitra, izany fanompoana izany dia tsy mba"amoron-tsiraka", ohatra, ny vahaolana ny olana ara-tsaina toy ny manokana naniry ny vokatra farany fa tsy maintsy tongaAo ny toro-hevitra, ny psikology, ary maimaim-poana ny fifandraisana miezaka mba ho azo antoka fa ianao ary ianao ihany no mamaritra ny lohahevitra, ary mazava ho azy fa ny resaka. Ao amin'ny"maimaim-poana ny fifandraisana"tsy mahazo namana, saingy ny mahay interlocutor ao psikolojia sy ny filozofia. Efa mba nieritreritra izay mety ho tsara mba ho afaka mifandray manokana psikology, na ny filozofa (ohatra, amin'ny alalan'ny"mailaka"na"icq") vao mba miresaka? Raha tsy misy ny faniriana manokana mba hamaha olana sy fanontaniana, fa vao mba miresaka. Indraindray fotsiny aza dia efa ampy ny faharanitan-tsaina mba ho conversationalist izay mandoa ampy tsara ny teny, ary mety hitarika ny resaka mazava tsara (tsy eo anivon'ny"mavo karazana"). Araka ny resaka, taratry ny fifanakalozan-kevitra no hany fomba mba hanesorana ny sesilany fahazarana ny asa, ary koa mba hahafantatra amin'ny fiainana andavanandro. Ny resaka kolontsaina no nanosika lavitra ny sisin'ny ny fifandraisana toy ny lahy sy ny vavy taratasy.
Ao amin'ny foibe, dia nisy fifanjevoana ao amin'ny vaovao ny asa, ary matetika no tanteraka foana ny resaka.
Ny toerana ho an'ny fifanakalozan-kevitra manan-danja, ny fandinihana sy ny fikarohana ho an'ny zava-baovao (na fotsiny ho an'ny tena na ho an'ny tenanao) - ny valin'ny fanontaniana tsirairay mbola saika na inona na inona. Fa eo amin'izao tontolo izao, dia tena mahaliana sy miavaka inona isika, mandoa ny saina ary inona isika, te-hijanona kely mba hahatakatra. Avy amin'ny ara-tsaina ny fomba fijery, dia mety ho liana amin'ny ny fitondran-tena ny olona iray, ny fanazavana fa dia te-hahita. Mety ho gaga amin ny fanehoan-kevitra ny olona hafa ny zava-mitranga na zavatra, ny dikany sy ny soatoavina. Ny saina dia afaka miteraka toetra mampiavaka ny fomba fijery na ny zavatra niainany. Ary angamba fotsiny isika te-hahafantatra tsara kokoa ny tenantsika, saingy tsy fantatro hoe inona izany. Ary ny fahalalana manokana, izany dia"izay midika ho anareo", dia tsy hisolo toerana misy ara-tsiansa ny fahamarinana. Zavatra kely rehetra eto dia afaka ny ho fahafahana fa ny fisokafana, mba hahatakatra ny olona, mba hahitana ny hevitry. Ary amin'ny filozofika ambaratonga, dia matetika tsy mampaninona raha toa ka misy ny lohahevitra momba ny resaka na tsia.
Raha toa ilay olona ho hadihadiana dia nampirisika liana amin'ny ny toe-javatra, ny olona, ny tontolo manodidina azy sy ny fanentanana ny rehetra ilany azy, dia mandritra ny fanadihadiana ny momba ny tenany dia niforona.
Raha, mazava ho azy, ny mpandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra ny tsy hamela ny dinika hatao sy ny tsy hiditra ao amin'ny fifanakalozan-kevitra. Ary noho izany, raha toa ka ny mpiara-miasa mahalala izay mba hangataka, ary, ambonin'izany rehetra izany, dia afaka mandre zavatra eo amin'ny andalana, eo amin'ny teny, eo amin'ny taratasy. ary ny psikology sy filozofa matetika manao fotsiny izay. Amin'ny fotoana iray, fony izy ireo dia miaina karazana"ny zavatra manindry mandry", na interlocutors afaka mihiaka hoe:"Oh, ity io, ity no niresaka momba ny."Ireo tena zava-dehibe ny fotoana ny fahatsiarovan-tena dia maneho ny sehatra vaovao ny fahazavan-tsaina, ny sehatra vaovao ny fahazavan-tsaina, ny fahitana ny finoanareo momba izao tontolo izao, momba ny fiainana, Eny, momba ny zava-drehetra. Ary izany"zavatra manindry mandry"tsy midika izany fa misy amin'izy ireo no tsy mahalala ny zavatra lazaina, fa tsy sary an-tsaina izany"zavatra"ao amin'ny vaovao fiaramanidina, izay tampoka teo dia nisokatra ary nanambara ny heviny izay manan-danja kokoa noho ny mahazatra ny olona izay efa hitany. Izaho ihany no milaza fa mifidy ny iray amin'ireo fomba roa mba hifandraisana. E-mail na Internet Irak'andriamanitra taratasy ("e-mail fifandraisana"mode). Online fifandraisana mampiasa ny Aterineto ho iraka (ny hafatra fandaharana Icq, M-Agente, Skype, etc."Chat"mode). Ny fomba hahazoana ny fahafahana mifandray. Voalohany, mifidy ny karazana fifandraisana (ara-tsaina na ara-filozofika), karazana fifandraisana (hafatra na resaka), mandoa ny fivoriana niady hevitra sy mahazo ny adiresy mailaka sy ny fifandraisana ho an'ny fifandraisana ampiasao hafatra (hafatra: Icq, M-Agente, Skype). Avy eo dia, raha toa ka efa nifidy ny"fifandraisana amin'ny mailaka"mode, fotsiny ny manoratra mailaka ho ahy sy handefa azy (ao ny mailbox na ao amin'ny iray amin'ireo hafatra fandaharana). Raha nisafidy ny"chat"amin'ny fomba an-tserasera, ny milaza fa izaho dia tonga dia hifandray Anao amin'ny alalan'ny mailaka (izay Ianao dia hahazo rehefa fandoavam-bola) sy ny mamaritra ny"fotoana"ny fifandraisana (cet) sy ny hoe"andro"fa mitohy ny fifandraisana an-tserasera.
Izaho no hampandre anareo haingana araka izay azo atao amin'ny alalan'ny mailaka na ny iraka. Ary isika dia tsy miresaka. Mandritra izany fotoana izany, na inona na inona ny manakana antsika avy amin'ny fampiarahana ny"Mailaka"amin'ny"Chat"araka izay irinao. Na izany aza, dia tokony homarihina fa tsy toy ny"miresaka amin'ny alalan'ny mailaka"ao amin'ny"chat","aterineto"ny fomba dia ilaina ho an'ny roa tonta.
Indray avy eo, izahay, ary mbola misy na amin'ny aterineto sy ny fifandraisana ara-potoana. Ary dia mazava fa"chat"- dia mora kokoa noho ny olona iray izay afaka haingana ny karazana sy ny famolavolana ny eritreriny. Fa ho an'ny ankamaroan'ny olona izay efa mampiasa Aterineto iraka, izany dia tsy sarotra. Manoratra aho maika ny tenako (izaho dia manana fomba fanaovana pirinty tao amin'ny maizina), nefa tsy te-mihazakazaka ny fifandraisana maika. Isaky ny efa voaloa vola mialoha ny fivoriana, na manaiky isika, indray mandeha ao amin'ny andian-dahatsary ny efa voaloa vola mialoha ny fivoriana (toy ny maro maha-te, mazava ho azy). Midika izany fa dia hitehirizany ny zo tsy anao amin'ny fotoana rehetra mba afaka manohy ny resaka, fa tsy voatery hazavao ny antony izany, ary mazava ho azy aho, dia refund rehetra ny vola aloa mialoha ho amin'ny fahafahana hanohy ny fifandraisana. Raha toa ka tsy manana hafatra fandaharana (Internet Messenger), dia jereo ny fizarana manaraka.
Tarihiny sy ny rano indray mitete ny kisary ho amin'ny an-Trano kisary eo amin'ny navigateur toolbar, ary avy eo dia tsindrio ny"Eny"amin'ny pop-ny varavarankelyAnkizivavy mahafantatra ny teny, dia izao no tena tsy tena tsara, kanefa raha ny miasa avy, ianao tsy mahatsiaro ny be dia be. Mety misy olona Mampiaraka amin'ny tranonkala dia manoro hevitra anao no tsy maintsy manokana ohatra koa, mba ta-handre. Mba hahafantatra sy miasa avy voasoratra tsara, ary manoro hevitra, ary downright tsy mahay) ny Mpanoratra. Angamba rehefa avy fametrahana sary. Angamba aho hampahafantatra anao ny Alemà, maniry mba ho any amin'ny zara-taniny avy any amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha. Hivory hiaraka alemaina, any Alemaina. Inona ny zavatra tsy maintsy laditsya. Na dia tsy fotsiny eo fotsiny namana fototra.
Ny Alemà nanapa-kevitra ny tsy hihaona eny an-dalambe, any am-ponja, ny nandihy sns.
izany no tsara indrindra ho an'ny taratasy na amin'ny alalan'ny ny namany, na amin'ny alalan'ny namana. Miala tsiny ho an'ny toy izany ny toe-tsaina-ny. amin'ny alalan'ny Internet ao amin'ny ny Mampiaraka toerana.
Andeha isika hiresaka momba ny tenanao
Izy ireo dia tena azo ekena.
Fanontaniana iray hafa ny hoe, nahoana Ianao no hemorrhoids, dia somary sarotra be ny mpiara-miasa, fa raha toa Ianao ka raiki-tampisaka workaholic, alemana no tena nidina ho an'ny ny tonga lafatra mpiara-miasa. mazava ho azy, any Alemaina be dia be ny Alemà aho, dia hanoratra isan'andro na dia tsy misy ho Fiarahana. Tsy mahalala izay mba hanoratra, namako avy any Berlin ny vadiny nahita ny momba an'i Petera. ankoatra misy dikan-teny anglisy sy ny afaka mamaky ny tranonkala rehetra fa mitady hampiditra-teratany fiteny alemana. koa maro ny mpifindra monina avy ao amin'ny vondrona EOROPEANA dia voasoratra-tenin-drazany-zavatra Ratsy, Ianareo rehetra. Zazavavy anjara dia mitady, sy ny Anareo. teny an-dalana, izaho koa dia mipetraka any Alemaina, koa miaraka Aminareo izahay, ry izahay karazana mpiara-miasa aminy. Ny mpanoratra dia tsy avy any Okraina ary avy ao Kazakhstan. (Avy Ao Kazakhstan). Izy rehetra hiteny sy hanoratra: avy Berlin, hitondra azy avy any amin'ny vata fampangatsiahana). Anarana manana na dia ratsy. Ny mpanoratra, hihaona amin'ny Aterineto. Ankehitriny, hoy izy ireo, tao an-toerana dens ny tsy fahampian'ny mpiasa.
Noho izany dia manana vintana tsara.
Ao amin'ny Google hitady."Deutsch Online Fiarahana".
amin'ny chat roulette tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana olon-dehibe Mampiaraka toerana sary Mampiaraka ny fisoratana anarana maimaim-poana manaitaitra ny lahatsary amin'ny chat ho an'ny mpivady web chat roulette tranonkala mba hitsena anao video firaisana ara-nofo amin'ny chat Mampiaraka video Mampiaraka toerana dokam-barotra ny vehivavy te hihaona aminao ny lahatsary amin'ny chat fisoratana anarana maimaim-poana